Nanome Tsiny ny CNN Noho ny Vaovao Diso Momba ny Fireneny Taorian’ny Fifidianana Ny Ghaneana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Desambra 2016 7:07 GMT
Fivarotana lehibe ao Accra, Ghana. Sary Creative Commons avy amin'ilay mpisera Flickr, Michael Sean Gallagher.
Taorian'ny fifidianana mahomby sy milamina tamin'ny 7 Desambra, feno hafatra avy amin'ny Ghaneana ny Twitter tamin'ny Alahady 11 Desambra, hafatra milaza fa tany am-piangonana izy ireo mba hisaotra an'Andriamanitra noho ny voka-pifidianana tsara na mba hiara-mankalaza amin'ny antoko nandresy.
Saingy nanao fanamarihana tena hafakely ny sioka avy amin'ilay Ghaneana mpanao gazety ara-anatanjahan-tena Gary Al-Smith (@garyalsmith). Namoaka pikantsary tamin'ny ampahan'ny lahatsoratra iray nosoratan'ny haino aman-jery Amerikana CNN momba ny fifidianana tao Ghana izy izay nilaza fa sokajiana ho mijaly ny tsy fahampian-tsakafo ny firenena. Hoy izy tamin'ny siokany mampiasa ny tenirohy #CNNGetItRight ho an'ireo mpanjohy azy miisa 166.000 mahery:
Ah! @CNN, tsy nahafantatra aho fa “Mitsangana milahatra ela be mba hahazoana entana” na “miady mafy mba hahazo sakafo” ny Ghaneana. Ary monina ao aho.
Diso fanantenana i Gary fa tsy nanome sary tena izy mikasika ny toe-karen'i Ghana ny lahatsoratra navoakan'ny CNN. Tamin'ny fizarana faharoa tamin'ny lahatsoratra, milaza ny filoha voafidy Nana Akufo-Addo izy:
Ho fanamby lehibe an'i Akufo-Addo ny toekarem-pirenena. Hita tao amin'ny morontsirak'i Ghana tamin'ny taona 2007 ny tahirin-tsolitany, saingy mitolona mba hahazo sakafo sy tolotra isan'andro isan'andro ny Ghaneana. Mahazatra ny fahatapan-jiro ary matetika mitsangana milahatra ela be ny olom-pirenena mba hahazoana entana.
Manova ny tena zava-misy eny ifotony ao Ghana ny lahatsoratra. Amin'ny ankapobeny, tsy mitrongy vao homana ny Ghaneana, ary afaka mahazo sakafo sy fitaovana ampy izy ireo. Raha nahita filaharam-be momba ny sakafo ianao tamin'izany andro izany, mety ho fividianana ny sakafo vita ao an-toerana antsoina hoe “Waakye” izany, izay sakafo be mpankafy vita amin'ny vary voaharo tsaramaso – saingy mariky ny kalitaon'ny Waakye ny filaharana lava be, fa tsy hoe misy ny tsy fahampian-tsakafo goavana.
Taloha, nisy ny olana tamin'ny fahazoana herinaratra noho ny krizin'ny angovo, saingy ankehitriny, manana herinaratra ny Ghaneana ary tsy miaina fahatapahan-jiro intsony araka ny nolazain'ny CNN.
Niteraka ny fahatezeran’ ireo Ghaneana marobe tamin'ny CNN ny siokan'i Gary, ary maro no namaly tamin'ny fanesoana ny CNN noho ny vaovao tsy marina. Mpanao gazety Ghaneana hafa, tahaka an'i Nana Ama Agyemang (@JustNanaAma) ao amin'ny Citi FM, nisioka hoe:
Tati-baovaon'ny kamo avy amin'ny @CNN ao anaty tantara mahafinaritra. Tsy mba misy fahasamihafana kely, fa marika mahazatra “Mijaly ny Afrikanina.”
Nilaza tamin'ny CNN mba hitatitra vaovao marina momba an'i Ghana ny vadin'ny filoham-pirenena ao Ghana, Lordina Mahama (@firstladyGhana):
#CNNGetItRight firenena kanto sy mandroso izahay. Ataovy marina ny vaovao avoaka momba anay.
Nilaza ny vaovao ihany koa ny haino aman-jery sasany ao an-toerana. Myjoyonline nampiseho fahadisoana maro hafa tao amin'ny lahatsoratra, nilaza fa nosoratan'ny mpanoratra roa sady tsy ao Ghana no tsy Ghaneana ny lahatsoratra:
Niteraka fanesoana avy amin'ny Ghaneana ny fahadisoana, vao mainka izy ireo sosotra raha nahita fa nosoratana mpanao gazety Nizeriana monina ao Lagos, Stephanie Busari, sy iray hafa monina ao Atlanta, Ralph Ellis ny lahatsoratra.
Anisan'ireo fahadisoana hafa, nilaza ny lahatsoratra hoe “Ghaniana”, raha tokony ho ‘Ghaneana’ no iantsoana ny olona ao amin'ny firenena.
Ankoatra izany, voka-pifidianana diso no navoakan'ny lahatsoratra. Hoy izy: “Akufo-Addo avy amin'ny Antoko Tia Tanindrazana Vaovao no nandresy tamin'ny vato 5.180.389 manoloana ny 4.193.861 na tokony ho 55% manoloana ny 45%, hoy ny solontenan'ny Foibe Fanangonam-boka-pifidianana ao amin'ny firenena (EC) izay nanamarina ny taratasy voka-pifidianana avy amin'ireo fari-pifidianana miisa 241.”
Diso izany satria ny fanisan'ny EC avy amin'ireo fari-pifidianana 241 dia nanome 54,69% ho an'i Nana Addo, ary 43,60% ho an'i John Mahama, ka mahagaga ny nahitan'ny CNN io tarehimarika io.
Anisan'ny fahadisoana iray hafa ny filazana fa nanohitra ny fifidianana ankapobeny tamin'ny 1998 ny filoha voafidy ao Ghana, Nana Akufo-Addo, kanefa tamin'ny 1996 sy 2000 no tena notoherina tokoa ny fifidianana.
Naka io vaovao io ihany koa ireo haino aman-jery iraisam-pirenena hafa, anisan'izany ny BBC, ny Breitbart tranonkala Amerikana farany ankavanana ary ny fahitalavitra RT vatsian'ny governemanta Rosiana ara-bola RT.
Efo Dela naminavina tamim-piesoana ny fanapahan-kevitra nahatonga ny lahatsoratra:
CNN: tokony hanoratra momba ny fahombiazan'ny fifidianana ao Ghana isika
CNN ihany: tsy hamaky izany ny olona. Ampio hoe “mitrongy vao homana” izany no tian'ny olona
Avy eo, ho setrin'ireo sioka, nahitsin'ny CNN ny fahadisoana tamin'ny lahatsoratra ary nolazainy tao amin'ny fanamarihan'ny tonian-dahatsoratra fa tsy nanome sary tena izy momba ny toe-karen'i Ghana ny lahatsoratra teo aloha. Jemila Abdulai (@Jabdulai), mpanoratra sady bilaogera, nisioka ny pikantsarin'ny lahatsoratra nahitsy:
Nahitsy ihany ny lahatsoratry @CNN momba ny fifidianana taty Ghana.
Nangataka tamin'ny CNN mba hiala tsiny i Mawuli Tsikata (@MawuliTsikata), mpitantana ny CitiFm:
@CNN Nanamarika ny fanitsiana ny lahatsoratra teo aloha izahay. Afaka mamoaka fialan-tsiny ampahibemaso ho an'ny Ghaneana ve ianareo. #CNNGetItRight
Amin'ny ankapobeny, faly ireo Ghaneana marobe fa afaka nanery ny CNN mba hanitsy ny tatitra diso momba ny firenena izy ireo, saingy mampalahelo fa efa nivoaka ny lahatsoratra vao novaina.